नायिका गरिमा पन्त आमा बन्दै बुधवार, बैशाख १, २०७८
कुकुर मारिदा आँशु आउने शुष्माका मान्छे मर्दा आउँदैन् ? मंगलवार, चैत्र ३१, २०७७
नारी अस्तित्वमा समर्पित नमूनाको फेसन शो मंगलवार, चैत्र ३१, २०७७
यी हुन फोटोसुट गराएर जेल जाने मोडल अहिले हामी २१ ‌‍‍औं शताव्दीमा छौं । अहिले बालक देखि बृद्धसम्मको हातहातमा मोबाईल हुने गरेको छ । बेला न कुबेला मोबाईल निकालेर सेल्फी खिच्न पछि पर्दैनौं । तर फोटो नै खिचेबापत हामीले जेलजीवन भोग्नु परेको छैन तर इजिप्टमा फोटोशुटका कारण एक मोडल र उनको फोटो खिच्ने फोटोग्राफर जेल जानुपरेको छ । मंगलवार, चैत्र ३१, २०७७
बलिउडमा ऐश्वर्या राम्री भन्ने कि सुपर सेक्सी ? बलिउडमा अहिलेसम्मकै सुन्दर नायिकाका रुपमा ऐश्वर्या रायलाई लिइन्छ । उनी यति राम्री छन् कि, हर कोहीले मन पराउँछन् । ऐश्वर्यालाई विस्थापित गर्ने नायिका बलिउमा अहिले पनि देखिदैनन् । सोमवार, चैत्र ३०, २०७७
हट कादर्शिन बनिन् विश्वकै चर्चित अर्बपति अमेरिकी चर्चित सेलिब्रेटी हुन्, किम कादर्शिन । उनको क्षमता अनेक छ । टेलिभिजनमा उनी रियालिटी शो चलाउँछिन् । त्यसपछि उनी ब्यापार गर्छिन् । केही गीतमा मोडलिङ पनि । यति मात्रै होइन, उनी बेला बेला पोर्न भिडियो समेत खेल्छिन् । जहाँबाट उनले मोटो रकम पारिश्रमिक लिन्छिन् । बिहिवार, चैत्र २६, २०७७
गायिका टीका सानुको लोभलाग्दो फ्यान फ्लोइङ पछिल्लो समय चर्चामा आउँदै गरेकी गायिका हुन्, टीका सानु । दाङ जिल्लाबाट काठमाडौँ आएकी टीका लोकदोहोरी क्षेत्रमा एक आशलाग्दो गायिकाका रुपमा संघर्ष गरिरहेकी छिन् । तर उनको फ्यान फ्लोइङ भने लोभलाग्दो छ । बिहिवार, चैत्र २६, २०७७
हेर्नुहोस सुर्खेती चेली सगुन शाहीका बोल्ड तस्बिर ६० को दशकपछि काठमाडौँ छिरेकी सगुन शाहीले लामो समय नेपाली मोडलिङमा राज गरिन् । सामान्य गाउँघरदेखि शहरका बोल्ड सिनमा समेत सगुन देखिएकी छिन् । युट्युबमा उनले मोडलिङ गरेका भिडियो थुप्रै छन् । बिहिवार, चैत्र २६, २०७७
बियोन्से र मदनकृष्ण नयाँ गीत गाउँदै फुलबुट्टेलाई नेपाली गायकी स्टाइलमा अफ्रिकन गायिका बियोन्सले पनि गाइन् । त्यसपछि झन् यो गीतको चर्चा चुलियो । गीतबाट हिट भएपछि बियोन्से र मदनकृष्णले भेटे । कुराकानी गरे । मदनकृष्णलाई भेटेर बियोन्से रोइन् । झन चर्चा चुलियो । बिहिवार, चैत्र २६, २०७७
प्रियंकाले बच्चा कहिले जन्माउछिन ? केही समय अघिदेखि सामाजिक सञ्जालमा उनी गर्भवती छन् कि भन्ने विषयमा चर्चा चलेको थियो। उनका शुभचिन्तक तथा फ्यानहरूले उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नदेखिएको र पोस्ट गरिएका फोटोमा मोटाएको देखिएको जस्ता कुरालाई आधार बनाएर प्रियंका गर्भवती भएको हो कि भन्ने अड्कल काटेका थिए। अब प्रियंकाले खुलस्त रूपमा आफू गर्भवती भएको स्वीकारेकी छन्। शनिवार, चैत्र २१, २०७७
सेक्सी सन्नीका बोल्ड तस्बिर (फोटोफिचर) क्यानडेली सन्नी अहिले भारतमा छिन । उनी भारतमै बस्छिन् । उनका पति डेनियलसँग मुम्बईमा उनको आलिसान घर छ । बंगला छ । उनी पछिल्लो समय बलिउडका कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छिन् । आइतवार, चैत्र १५, २०७७
यस्तो देखियो कलाकारको होली नेपाली कलाकारले पनि धुमधामका साथ होली मनाएका छन् । कोरोनाको भयले घरमै होली मनाएसँगै कलाकारले पनि होली मनाएका छन् । कलाकार निखिल उप्रेति, सञ्जिता लुईटेल, प्रियंका कार्की लगायतले होली मनाएका छन् । आइतवार, चैत्र १५, २०७७
प्रियंकाले अमेरिकामा खोलिन रेष्टुरेन्ट प्रियंकाको रेष्टुरेन्टमा खासगरी दक्षिण एसियाली स्वाद र परिकार पाइनेछ । अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा रहेको रेष्टुरेन्टमा भारतीय स्वाद खुवाउने मुख्य उद्धेश्य रहेको प्रियंकाको भनाई छ । । आइतवार, चैत्र १५, २०७७
राज सागरले ल्याए 'ए मन भएका मान्छे" ५६ औ अन्तर्राष्ट्रि रंगभेद तथा सबैखाले जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको सन्दर्भ पारेर उक्त गीत सार्वजनिक गरिएको हो । गीतका शब्दमा २१ औँ शताब्दीमा पनि मान्छेले ब्यहोर्नु परिरहेको विभेद विरुद्ध आवाज उठाइएको छ । बुधवार, चैत्र ११, २०७७
‘हुतुतु’मा पल र प्रदीपसँग रोमान्स गर्दै साम्राज्ञी यतिबेला फिल्मी नगरीमा नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले रोमान्टिक नायक पल शाह र प्रदीप खड्कासँग रोमान्स गर्ने चर्चा छ । ‘प्रेमगीत’ सिरिज निर्माण गरिरहेका निर्माता सन्तोष सेनले फिल्म ‘हुतुतु’मा साम्राज्ञीलाई अफर गरेका छन् । सोमवार, भदौ २२, २०७७
लोकप्रिय टिकटकका सीईओले दिए राजीनामा मयेर डिज्नी छोडेर गत जुन १ देखि टिकटकको सिइओ बनेका थिए। चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सको स्वामित्वमा रहेको टिकटक पछिल्लो समय संसारभर युवा पुस्तामा लोकप्रिय भएको छ। अमेरिका पनि यसको लोकप्रियता बढ्दो छ। लोकप्रियता बढेसँगै टिकटक अमेरिका र चीनबीचको राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। बिहिवार, भदौ ११, २०७७